अञ्जली र महेशको रो’मान्स रहेको ‘बाटैमा रैछ घर तिम्रो’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
१ असोज २०७६, काठमाडौँ । गायक राजनराज सिवाकोटी र गायिका रेखा शाहको आवाजमा रहेको नयाँ म्युजिक भिडियो दर्शक स्रोता माझ सार्वजनिक छ । उनीहरूको स्वरमा रहेको ‘बाटैमा रहिछ घर तिम्रो’ बोलको गीत युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । गोविन्द राईको कोरियोग्राफी रहेको गीतमा महेश खड्का र अञ्जली अधिकारी फिचर्ड रहेका छन् । सो गीतमा शब्द सृजना र सङ्गीत राजनराज सिवाकोटीको रहेको छ । नितिन चन्दको निर्देशन रहेको सो गीतको भिडियोमा महेश खड्का र अञ्जली अधिकारीको अभिनय रहेको छ । दिपेन बस्न्यातले छायाङ्कन गरेको म्युजिक भिडियोलाई दिपेनले नै सम्पादन गरेका छन्…
१ असोज २०७६, बुधवार,काठमाडौँ । अभिनेत्री श्वेता खड्काले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँग भेट गरेकी छिन् । अभिनेत्री खड्काले बुधवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेर निर्माणाधीन माझी बस्तीका बारेमा जानकारी गराएको बताएकी छिन् । उनले भेटमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण भइरहेको एकीकृत माझी बस्तीको बारेमा कुराकानी भएको जानकारी दिएकी छिन् । श्वेता फेसबुकमा लेख्छिन् “हिजो , सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओली ज्युसंग भेट्ने शुभ अवसर जुर्‍यो । भेटका अवसरमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधिन एकिकृत नमुना माझी बस्तीको बारेमा कुरा भयो । भेटका क्रममा उहाँले प्रकट गर्नु भएको सकारात्मक बिचार…
एजेन्सी । जमैकामा भइरहेको एक फुटबल म्याचमा खेल्दै गर्दा चट्या’ङ परे पछि कैयौँ खेलाडीहरूलाई उपचार गर्नु परेकको छ । वुल्मर्स बोयज स्कुल र जमैका कलेजबिच सोमवार भएको म्याच सकिनलाग्दा चट्या’ङ परेको थियो ।उक्त घट’नाको फुटेजमा चट्या’ङ परेपछि दुई जना खेलाडी घुँडा मारेर बसेको र टाउको समातेको देखिन्छ । त्यसपछि पनि म्याच चालू रहन्छ तर अन्य खेलाडी र प्रशिक्षकहरूले खेलाडीलाई गाह्रो भएको थाहा पाएर सहायता गर्न दौडिन्छन् । पाँचजना खेलाडीलाई अप्ठ्यारो परेपछि रेफ्री कार्ल टाइरेलले खेल बन्द गरेका थिए । जमैका कलेजका टेरेन्स फ्रान्सिस र वुल्मरका ड्वेन एलेनलाई निकै चोट लागेको…
पुर्व राजा बि’रेन्द्रसंग संगै हिड्ने ९० ब’र्षिय हजुरबुवा, ऋ’ण राजा वि’रेन्द्रले तिरिदिएका थिए, बि’रेन्द्रले गरेका कुरा सम्झेर भावुक बने (भिडियो) पूर्व रा’जपरिवारको दु’खद अ’न्त्य भएको धेरै वर्ष भ’इसक्यो । तर त्यो घ’टनाको वा’स्तविकमा अहिले सम्म वाहिर आएको छैन । घ’टनाका बारेमा विभिन्न अ’ड्कलवाजी ग’रिएका छन् । क’हिले काँ’ही रा’जपरिवारसंग जो’डिएका विभिन्न पात्रका बा’रेमा चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय रा’जपरिवारसंग नजिक भएकाहरुले अ’भिब्यक्त गरेका भ’नाईहरुले तरंग ल्या’उने गरेका छन् । यसै बिचमा पूर्व रा’जपरि’वारसंग नजिक भएका एक ९० व’र्षीय वृद्धले फेरी केही तथ्य बाहिर ल्या’एका छन् । धादिगंको सांकोश…
नायक प्रदीप खड्काले ‘प्रेमगीत ३’ का लागि बनाए यस्तो ज्यान ( हेर्नुहोस फोटो )
अभिनेता प्रदीप खड्काले ‘प्रेमगीत ३’ का लागि बनाए यस्तो ज्यान ( हेर्नुहोस फोटो ) चर्चित नेपालि अभिनेता प्रदिप खड्का अहिले नेपाल को सार्बाधिक महंगा र डिमान्डेड अभिनेता प्रदिप खड्का हुन् ! तर उनि अभिनित चलचित्र प्रेमगीत २ बाहेक अरु फिल्म हरु बक्सफिस मा सफल छैनन् ! तर उनको त्यो असर ब्राण्ड भ्यालु मा परेको छ ! पछिल्लो रिलिज फिल्म ‘लभ स्टेशन’ ले आफ्नो फ्लप श्रृंखलामा पूर्णविराम लगाउनेमा उनी विश्वस्त थिए । तर, एक टर्कीस फिल्मको कथा हुबहु चोरिएको प्रमाणित भएपछि फिल्मले हलमा पानी भन्न पाएन । यो फिल्मको असफलताले हच्किएका…
पशुपति शर्माको यो वर्षको नयाँ दसैँ गीत ‘कान्छी बुहारी’ (भिडियो)
काठमाडौँ । नेपालीहरूको महान् चार्ड बडा दसैँ नजिकिँदै गर्दा दशैका गीतहरू बजारमा आउने क्रम बढ्दै गएको छ । देश तथा विदेशका साङ्गीतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहेका लोकप्रिय गायक पशुपति शर्माले यो वर्षको नयाँ दसैँ गीत “कान्छी बुहारी” युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । चर्चित गायिका सम्झना भण्डारी र पशुपति शर्माको स्वर रहेको यस गीतमा पशुपति शर्माकै शब्द सङ्गीत रहेको छ । गीतको भिडियो निकै उत्कृष्ट बनेको छ । जसमा गायक गायिका दुवै जनाले अभिनय गरेका छन् । दुर्गा पौडेलको निर्देशनमा तयार भएको भिडियो लाई गिरमान सोहन कुमालले खिचेका हुन् भने ,…
अष्ट्रेलियामा पनि यस्तो ! करोडौं स्वा’ह….हेर्नुहोस भिडियो सहित
अस्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियामा पनि यस्तो ! करोडौं स्वा’ह….हेर्नुहोस भिडियो सहित ! केही य’स्ता ठ’गीका घ’टनाहरु रहेका छन् ज’सका कारण ने’पाली वि’द्यार्थीहरु अ’ष्ट्रृलियामा ठ’गिदै आइरहेका छन् । वि’टको’इनका कारण धेरै नेपाली वि’द्यार्थीहरु ठ’गिएका छन् । धेरै वि’द्यार्थी’हरुलाई प्र’लोभनमा पारेर क’रोडौँ ठ’गी भएको र’हस्य बाहिर आएको छ । हेर्नुहोस भिडियो यो पनि पढ्नुहोस ! अब नर्सहरूका लागी अस्ट्रेलियामा नयाँ नियम… मेलबर्न । अस्ट्रेलियामा अब विदेशी नर्सहरूका लागी छुट्टै नयाँ नियम आउने भएको छ । अस्ट्रेलियन सरकारले यसै वर्ष देखि नर्सहरूको रजिस्ट्रेसनमा नयाँ नियम लागु गर्ने भएको हो । हाल अस्ट्रेलियामा आउने नर्स तथा…
मे’कअप पुछ्ने बि’त्तिकै यस्ता दे’खिन्छन् यी २५ से’लिब्रिटी हेर्दा परिन्छ चकित
मे’कअप पुछ्ने बि’त्तिकै यस्ता दे’खिन्छन् यी २५ से’लिब्रिटी हेर्दा परिन्छ चकित जब हामि कुनै सेलिब्रेटी को म्यागजिन अथावा सेलिब्रेटी को इन्टाग्राम टुइटर फेसबुक अकाउन्ट हरुमा उनीहरु को फोटो हेर्छौ र उनीहरुको त्यो सुन्दरता देखेर हामि मुग्ध हुन्छौ ! हामि सोच्छौ कि सेलिब्रेटी को मेकअप बिना नै यस्तो सुन्दरता प्राप्त गर्न सकिन्छ तर कति सेलिब्रेटी भने प्राकृतिक सुन्दर्तासंग यति सहज छन् कि त्यसलाई सार्बजानिक गर्न पनि हिच्किचाउँदैनन् ! ब्राइट साइडले सेलिब्रिटीका मेकअप बिनाका तस्बिर संकलन गरेको छ । १. डेमी लोभ्याटो २. लेडी गागा ३. बियोन्से ४. सोफिया भर्गरा ५. गनेथ…
म्यानमारमा रमाउँदै तेरिया र स्वस्तिमा (फोटो फिचर)
काठमाडौँ । एक पछि अर्को चलचित्र बाट सफलता हात पार्दै आएकी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का यति बेला छुट्टी मनाउन म्यानमार पुगेकी छिन् । गत वर्ष रिलिज भएको स्वस्तिमा अभिनीत चलचित्र बुलबुलले सोचेभन्दा राम्रो व्यापार गर्न सफल भयो , त्यसपछि ‘हजार जुनी सम्म’ चलचित्रमा काम गरेकी स्वस्तिमालाई यस चलचित्र बाट भने खासै राम्रो तारिफ पाएन । यस्तै श्रीमान् श्रीमती नै जोडी बनेर अभिनय गरेको चलचित्र “घामड सेरे” को पनि भर्खरै मात्र पोस्टर सार्वजनिक भएको छ, तर; पोस्टरमा स्वस्तिमा अटाएकी छैन । म्यानमारमा चर्चित डान्सर तेरिया फौजा मगर पनि पुगेकी छिन् । तेरिया…
अ’घोर बा’बाको डि’माण्ड- पचास क’रोड दि’नेसँग बि’हे गर्छु’
रा’जन घिमिरे काठमाडौंको मु’टु मानिने ला’जिम्पाटमा ज’न्मेर त्यही से’रोफेरोमा हु’र्केका हुन् उनी । नि’कै शा’नसौकत र ए’कप्रकारले आ’लिसान जीवन नै भो’गे किशोर वयमा उनले । स्कू’लकालदेखि नै उ’द्दण्ड स्वभा’वका पनि थिए उनी । आज पनि ला’जिम्पाट क्षेत्रका पुराना वा’सिन्दाले उनको नाम आउँदा सा’नोतिनो फ’टाहा र गु’ण्डाकै रूपमा चिन्छन् उनलाई । ‘हो’टलमा खायो अनि पैसा छैन भन्दै न’तिरीकन हिँ’ड्ने, कसैले गा’ली गऱ्यो भने ठो’किदिन्थेँ । अनि ला’इफ ड्या’मेज !’– य’सै भन्छन् उनी । उनी अर्थात् यज्ञ केसी उर्फ विजय । तर, यो नामले उनलाई चिनिँदैन आजकल । अहिले उनको परिचय ब्यापक…